वाइफाइ स्लो छ ? राउटरलाई भुइँमा या छोपेर नराख्नुहोस् – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी इन्फो / वाइफाइ स्लो छ ? राउटरलाई भुइँमा या छोपेर नराख्नुहोस्
वाइफाइ स्लो छ ? राउटरलाई भुइँमा या छोपेर नराख्नुहोस्
ICT Khabar/आइसिटी खबर August 27, 2018	आइसिटी इन्फो, आइसिटी न्युज/टेक अपडेट Leaveacomment 661 Views
वाइफाइको प्रयोगमा कहिलेकाँही भने समस्या आउन सक्छ ।
सेवा प्रदायकले पूर्ण इन्टरनेट प्रदान गरिरहँदा पनि कुनै डिभाइसमा भने इन्टरनेटमा समस्या आउन सक्छ । यो समस्या समाधानको लागि वाइफाइलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि निम्न उपायहरु केही प्रभावकारी हुनसक्छन् –
राउटरलाई कहिल्यै पनि भुइँमा राख्नुहुँदैन । राउटरले सिग्नल मुनितिर दिने गर्छ । यस्तोमा भुइँमा राउटर राख्नाले स्मार्टफोन तथा ल्यापटपभन्दा पनि वाइफाइको सिग्नल जमिनतर्फ जान्छ । वाइफाइले राम्रोसँग काम गर्न राउटरमा कुनै किसिमको अवरोध हुनु हुँदैन ।
२. राउटरलाई छोपेर नराख्नु
३. एन्टेनामा ध्यान दिनु
राउटरमा रहेको दुई एन्टेनामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । उक्त एन्टेना सकेसम्म नबांगियोस् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । साथै उक्त दुई एन्टेनाहरु एकअर्काको सोझो हुनु जरुरी हुन्छ ।
Previous १० शक्तिशाली महिलाहरु : प्रविधि जगतमा रोल मोडलको भूमिका
Next स्मार्टफोनमा यस्ता साइट हेर्नु खतरा, रेनसमवेयर भाइरस अटो इन्सटल हुन्छ